Uyifomatha njani ithebhulethi ye-Android: Zonke iindlela | Iindaba zeGajethi
U-Eder Esteban | | Android, Tutorials
Okwangoku, iipilisi ezininzi kwintengiso zisebenzisa i-Android njengenkqubo yokusebenza. Ke ukhetho lweemodeli kwintengiso lubanzi. Ke ngoko, kufuneka usoloko unayo imiba ethile kwiakhawunti xa uthenga ithebhulethi entsha. Emva kwethutyana, kusenokubakho iingxaki kuloo tablet.
Kungenzeka ukuba enye i-malware iye yangena kuyo, okanye ukuba kukho iingxaki ekusebenzeni kwayo. Okanye umniniyo ucinga ukuyithengisa. Kwiimeko ezinjalo, Isisombululo esenziwa rhoqo kumacwecwe e-Android kukubheja ukufomatha.
1 Yintoni ukufomatha ithebhulethi ye-Android?
2 Fomatha ithebhulethi ye-Android
2.1 Fomatha kuseto
2.2 Fomatha ithebhulethi kwimenyu yokubuyisela kwimeko yesiqhelo
Yintoni ukufomatha ithebhulethi ye-Android?
Kwimeko yezixhobo ze-Android, ezinjengepilisi, Singathetha ngokufomatha okanye ukubuyisela umzi-mveliso. Le nkqubo ithetha ukuba yonke idatha ekwithebhulethi iya kucinywa. Ke zonke iifayile ezikulo (iifoto, iividiyo, umculo, amaxwebhu, njl. Njl.) Ukongeza kwizicelo ezikhutshiweyo, ziya kususwa ngokupheleleyo. Akuyi kubakho mkhondo kwezi fayile kwithebhulethi.
Le yinkqubo enobundlongondlongo, kodwa iyenzeka ithe ithebhulethi ye-Android ibuyele kwimeko yayo yoqobo. Ukusukela xa ufomatha, ibuyela kwimeko apho ishiye khona umzi-mveliso. Kungenxa yoko le nto kusaziwa ngokuba kukubuyisela umzi-mveliso. Le yinto eyenziwa ngamaxesha athile kakhulu, kuba oko kuthetha ukulahleka kwayo yonke idatha ekwithebhulethi ekuthethwa ngayo.
Kungenxa yoko, ukuba umnini ucinga ukuthengisa ithebhulethi leyo, okanye ukuyinika omnye umntu, yindlela elungileyo yokuthintela loo mntu ekubeni angabinakho ukufikelela kwidatha yakho. Kwaye ukuba intsholongwane ingene, Yintoni enokwenzeka kwizixhobo ze-Android, ukufomatha yindlela yokuyisusa, ukuba akukho enye indlela esebenza ngayo. Ke kwiimeko ezithile, yinto enokwenziwa. Ukuyifumana kwithebhulethi, kukho iindlela ngeendlela ezahlukeneyo. Iifom esikuxelela zona ngezantsi.
Fomatha ithebhulethi ye-Android
Into eqhelekileyo kukuba kwiipilisi ze-Android kukho iindlela ngeendlela ezahlukeneyo zokwenza le fomathi. Kuzo zombini iimeko yinto esinokuyifumana kwithebhulethi uqobo. Awudingi nasiphi na isixhobo esongezelelweyo ukuze ukwazi ukufomatha. Nangona kunokubakho iimodeli ezingasivumeliyo kwezi ndlela zimbini. Inokuxhomekeka kulwakhiwo ngalunye okanye imodeli nganye, ukongeza kuhlobo lwenkqubo oyisebenzisayo.
Indlela yokuqala yokufomatha ithebhulethi kwi-Android ivela kuseto lwakho. Ngaphakathi kwazo kukho icandelo apho kunokwenzeka ukuqala le nkqubo. Ke ngoko, kufuneka sivule useto lwayo kuqala. Nje ukuba ngaphakathi kubo, indawo ekhethekileyo yalo msebenzi inokutshintsha ukusuka kwenye imodeli kuye kwenye.
Kwezinye iipilisi kufuneka singene kwicandelo lokhuseleko. Ngelixa kwezinye licandelo lokukhetha eliphambili ekufuneka silingenisile. Ngayiphi na imeko, ngaphandle kwendawo okuyo, Icandelo elisithandayo libizwa Backup / Buyisela. Ke ngoko, sinokuyikhangela ukuba akukho ngaphakathi kuseto lwethebhulethi yethu ye-Android ukuze ikhawuleze ukuyifumana kwithebhulethi. Nje ukuba kweli candelo, inkqubo ingaqala.
Into yokuqala ebuzwa ngabasebenzisi yile ukuba ufuna ukwenza i-backup. Njengokuba xa ufomatha siza kucima yonke idatha kwithebhulethi, kulungile ukwenza ikopi yezo datha ungafuniyo ukuzilahla. Kwimeko ye-Android, sinokugcina ngokulula ugcino kwiGoogle Drayivu. Xa usitsho ikopi, emva koko kunokwenzeka ukuba ungene kwicandelo lokuBuyisa idatha.
Kweli candelo Inkqubo yokufomatha ithebhulethi iqala. Umsebenzisi uya kubuzwa ukuba uqinisekile ngento abafuna ukuyenza. Ukuba sele unayo ugcino olunjalo, emva koko ungaqala ngoku. Ke kuya kufuneka uyinike ukwamkela. Emva koko ukufomatha kwale thebhulethi ye-Android kuya kuqala. Kungathatha imizuzu embalwa ukuyigqiba, kuxhomekeke kubungakanani bedatha egcinwe kuyo.
Fomatha ithebhulethi kwimenyu yokubuyisela kwimeko yesiqhelo
Kukho indlela yesibini, ehlala isebenza yokufomatha ithebhulethi ye-Android. Imalunga nokusebenzisa oko kubizwa ngokuba yimenyu yokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Ukufikelela kuyo kuya kwahluka ukusuka kwenye imodeli ukuya kwenye, kuba zimbini iinkqubo. Okokuqala kukucima ithebhulethi, kwaye ugcine amandla kunye nevolumu phezulu amaqhosha acinezelwe ngaxeshanye imizuzwana embalwa, kude kuvele imenyu kwiscreen. Kwimeko yesibini, inkqubo iyafana, kuphela kukho iipilisi apho kufuneka ucinezele kwaye unciphise umthamo.
Ke ngoko, kuxhomekeke kuphawu lwethebhulethi ekhankanyiweyo, kukho ukufikelela kule menyu. Nje ukuba indlela ekuthethwa ngayo isetyenziswe, imenyu eneendlela ezahlukeneyo iboniswa kwiscreen. Olunye ukhetho kwiscreen kukuseta kwakhona iFektri okanye Sula idatha, omabini amagama anokuvela kwiimeko ezininzi. Olu lukhetho ofuna ukulusebenzisa ngelo xesha.
Sebenzisa ivolumu phezulu nasezantsi amaqhosha kufuneka uhambe phakathi kwezi ndlela. Xa ufika kukhetho lokucima idatha, kuya kufuneka Sebenzisa iqhosha lamandla eethebhulethi ukuqinisekisa. Isikrini siza kubonisa umyalezo obuza umsebenzisi ukuba baqinisekile na ukuba bafuna ukwenza oku. Kungenxa yokuba inkqubo yokufomatha yathi i-Android ithebhulethi iya kuqala. Ukuqinisekisa, cinezela iqhosha lamandla kwakhona.
Ngale ndlela, ukufomatha kwethebhulethi ene-Android kuya kuqala. Kwakhona, inkqubo iya kuthatha imizuzu embalwa ukuyigqiba kwithebhulethi. Xa ugqityiwe, umyalezo uya kuvela kwiscreen. Ukuyiqala kwakhona, into eqhelekileyo kukuba kufuneka khetha ukhetho "ukuqala kwakhona inkqubo ngoku". Ngale ndlela, inkqubo iqala kwakhona, kodwa ngayo yonke idatha esele icinyiwe kwithebhulethi. Ibuyela kwimeko apho ishiye khona umzi-mveliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Android » Uyifomatha njani ithebhulethi ye-Android
I-Motorola Sonic Boost, isithethi esingenazingcingo kunye ne-Alexa ngexabiso eliphantsi